Imibongo yoSuku loMama oMnandi kuMfazi wakho - Okunye
Imibongo yoSuku loMama oMnandi kuMfazi wakho
Ukubhalela umbongo woSuku loMama emfazini wakho kunokwenza ukuba usuku olukhethekileyo lube nentsingiselo ngakumbi, kodwa akukho lula njengoko kunokuba ngathi kubonakala ngathi. Ukuba unengxaki yokufumana amagama afanelekileyo, sebenzisa enye yezi nkondlo ukukhuthaza.
Imibongo yoSuku loomama eSentimental yomfazi
Cinga ukongeza iswitiUmbongo woMama woSukuukuyaikhadi. Unokubeka enye kwisakhelo kwaye uyinike umfazi wakho njengeisipho soSuku loMama. Nokuba ngubani oya kwenza ugcino olusuk 'entliziyweni alonwabise kwiminyaka ezayo.
15 Imibongo Day Oomama Ukubonisa Uthando Lwakho
Imibongo ukusuka kuMama kuye kuNyana wakhe
Amakhadi ali-10 oMama oMnandi oMama okumenza ahleke
Usuku Lomama Enkosi Kumfazi Wam
Ukuqala kwam ukujonga emehlweni akho,
Ndandinomfanekiso-ngqondweni wabantwana bethu entlokweni yam.
Ndabona ukuba ubomi bethu bubekwe phambi kwethu,
Kwaye bendisazi ukuba siyokonwaba emva koko.
Enkosi ngokuba ngumfazi obalaseleyo
Ndiyabulela ngokuba ngoyena mama ubalaseleyo
Kubantwana bethu bendinokuphupha.
iinkqubo zolutsha ezingalawulekiyo
Usuku olumnandi loomama kumfazi wam
Kumama wabantwana bam,
Umfazi wam othandekayo, owoyikekayo,
Kubomi bethu obuhle, obumangalisayo.
Andikwazi ukubulela ngokwaneleyo
Ngokwenza usapho kunye nam.
Uthando lwakho kuthi nothando lwethu kuwe
Icacile ukuba ibonwe lihlabathi lonke.
Usuku oluhle loMama, Darling!
Ukusuka kumyeni wakho ngomhla woomama
Intliziyo egcwele uthando,
Intloko ezele bubulumko,
Izandla ezinobulali ezithuthuzela umntwana wethu,
Imilebe esoloko ithetha inyani ngobubele,
Umphefumlo omhle uzaliswe kukulunga nokukhanya.
Yintoni enye umntu anokuyicela emfazini nakwifayile ye-
Umama wabantwana bakhe?
buza ingcali yekhompyuter yasimahla kwi-intanethi
Ngomhla woMama kunye nayo yonke imihla.
Umfazi wethu omangalisayo
Andazi ukuba uyenza njani,
Ukugcina konke kunye.
Umsebenzi osisigxina, ugcwele abantwana,
Kwaye mna, ngokubi okanye ngcono.
Kufana nokuba Umfazi omangalisayo,
Ukusidibanisa sonke nge-lasso yakho yomlingo,
Ukusigcina emgceni kwaye izinto zihamba kakuhle,
Ungoyena ungcono, kwaye sicinga ukuba kufanele uyazi.
Ukuba konke bekushiyeke kum,
Ndingathanda ukuba siphithane nje kungabikho xesha.
Kodwa ndinethamsanqa kubantwana nakum,
Ungalungisa nantoni na uyenze ikhanye.
Nantsi ke inkosikazi yam eyoyikekayo
Ukusuka kum kunye nonyana wethu wabahedeni.
Siyakuthanda, siyakudinga, kwaye siyabulela kakhulu
Isigidi kunye nenye into oyenzayo.
Imibongo yoSuku loMama yomfazi ovela kumyeni wakhe
Uninzi lwabafazi balindele uxabiso olongezelelekileyo kubantwana babo ngoMhla woMama, kodwa bangaphi abafumana isipho esikhethekileyo njengombongo ovela kumyeni wabo ukukhumbula usuku? Ukuba ngenene ufuna ukuzisa uncumo ebusweni bomfazi wakho, kwaye mhlawumbi iinyembezi ezimbalwa ezonwabileyo emehlweni akhe, mnike umbongo othi yintoni entliziyweni yakho. Nokuba ubhala owakho umbongo okanye usebenzise omnye wemizekelo apha, into ebalulekileyo kukuba uthetha igama ngalinye.
Ukuzila Ukutya Kunye Nedetox Diets Isixhobo Somdaniso Ukutshaya Ukutya Products Ne Aids Craft Tips
mde kangakanani umntu obhinqileyo oneminyaka eli-14 ubudala
uyisusa njani i-oxidation kwi-aluminium
ungazitya izinja ezishushu ukhulelwe
Leliphi ilizwe md elifinyeziweyo
wazi njani xa indoda ye-gemini isemathandweni
uyifumana kanjani intombi ekwibanga lesi-4